Friday June 21, 2019 - 10:06:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax shalay ciidamo Xabashi Itoobiyaan ah lagula beegsaday deegaan katirsan Gobolka Baay ee dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya.
Qaraxa culus ayaa lala beegsaday Kolanyo ka tirsan Ciidamada Xabashida Itoobiya kuwaasi oo ku socdaalayay deegaan dhaca duleedka magaalada Baydhabo.
Kolanyada Qaraxa lala beegsaday ee Itoobiyaanka ah ayaa ka baxay Magaalada Baydhabo waxayna kusii jeedeen dhanka degmada Buurhakaba balse qarax xooggan ayaa lagula eegtay inta u dhaxeysa deegaanka Daynuunaay iyo degmada Baydhabo oo ka wada tirsan Gobalka Baay.
Inta la xaqiijiyay qaraxan waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ugu yaraan Shan askari oo Itoobiyaan ah dadka deegaanka waxay sheegeen in ay maqlayeen dhawaaqa qaraxa, wadada laamiga ah ee xiriirisa Buurhakaba iyo Baydhabo ayey ciidamada Itoobiyaanka si gaabis ah u isticmaalaan kadib markii ay ku bateen weerarada iyo qaraxyada.
Weerar horraantii sanadkan ciidamada Itoobiya lagula beegsaday wadadan ayaa sababay dhimashada Tobanaan askari iyadoona xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ay gacanta ku dhigeen gaadiid dagaal iyo saanado meleteri.